Jasmine : January 2012
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, January 31, 2012
လူသား များ ပို၍ကောက်ကွေ့ပြီး
ကျွန်မ ရင်ထဲက အဖြူရောင်
ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာတည်ရှိ၏ ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, January 28, 2012
မသေချာတဲ့ လောက ကမ္ဘာကြီးထဲ
နင်းပြီး ငါ အသက်မရှင်ချင်ဘူး ။
တံမြက်စည်းလှဲ ထားတယ်နော် ။
အဆင်မပြေဘူး အချစ်ရေ ။
ရှင်ရက်နဲ့လဲ မဝေးချင်ဘူး ။
ငါ့ဘ၀မှာ မင်းပါပဲ ။
ဘယ်ဘုရားမှ မကယ်နိုင်တဲ့ သေကွဲရှင်ကွဲတွေ
ဟိုတစ ဒီတစနဲ့ ကဗျာလေး
jasmine ရဲ့ c-box လေးမှာနေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုမေးမြန်းကျတဲ့
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, January 19, 2012
ဒါက မင်းလေးရဲ့ (ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း)
မင်း ဘ၀ ကိုလက်မှိုင်ချရအောင်
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, January 17, 2012
သံစဉ်ပျက်တဲ့ ဦးနှောက် တွေနဲ့
နှလုံးသား နှစ်ခု ထပ်တူပြုပြီးသားမို့
ချစ်သူကို အပြစ်မယူပါဘူး ။
နှလုံးသားကို ညောင်းညာကိုက်ခဲ စေလို့
ငါ့ဘ၀ထဲမှာ နထ္ထိ ။
ချစ်သူ ကျေနပ်ပါရဲ့လား ?
ကဗျာချစ်သူများရဲ့ ကိုယ်စား jasmine
Posted by စံပယ်ချို | Friday, January 13, 2012
ရှားရှားပါးပါး ကျွန်မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါ၏ ။
အတိတ် ------ ယခုလက်ရှိအချိန်များ
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, January 8, 2012
ကဗျာ ချစ်သော စာချစ်သော သူငယ်ချင်းအားလုံးကို
Posted by စံပယ်ချို | Friday, January 6, 2012
ဂျယ်လီပစ်ပစ် ရဲ့တဂ်ပိုစ့်လေးပါ-----ကဲ ဖတ်လိုက်ကြရအောင်နော်
အင်မတန်စာအရေးအသားညံ့သောကြောင့်စာဖတ်သူများ သီးခံဖတ်ပေးပါရန် အရင်ဦးဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ ။
*** စဉ်းစားလိုက်ပါတယ် ဘာစားရမလဲလို့ အပြင်သွားစရာရှိရင်တော့မြန်မြန်လေးထလိုက်တယ်***
မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ?
***ကော်ဖီ ပေါင်မုန့်မီးကင်ထောပတ်သုပ် တခါတလေကောက်ညင်းပေါင်း-ဆီထမင်း***
***ငါးမြင်းဗိုက်သား - ငပိမရမ်းသီးထောင်း - ပဲကြီးနဲ့ဆူးပုတ်***
အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ?
***အလုပ်မှာ ကော်ဖီမရှိလို့ သောက်ချင်ရင်ကင်တင်းမှာသွားသောက်ဖြစ်တယ်- မိုင်လိုတော့ရှိပါတယ်***
ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ?
***ကိုယ်စားနေတဲ့ ဟင်းတွေကိုမေမေကိုလဲကျွေးချင်မိပါတယ်- ကိုယ့်အမျိုးသားစားမကောင်းမှာလဲ စိတ်ပူမိပါတယ်***
***တခါတရံမှ သာလုပ်အားပေးသွားရတာပါ - သွားတဲ့နေ့ရက်တွေဆို အလုပ်ပြီးတာနဲ့ ယောက်ကျာင်္းကိုဖုန်းဆက်တယ် - အလုပ်ပြီးကြောင်းပြောပါတယ်***
*** ပြီးတော့ အခန်းထဲဝင် ရေခဲသေတ္တာဖွင့်ပြီးအအေး တခုခုသောက်ဖြစ်တယ်(ယောက်ကျာင်္းဝယ်ထားပေးတဲ့ အအေးပါ)
တအားစိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ?
***စကားအများကြီးမပြောတော့ပါဘူး မေမေကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်ယောက်ကျာင်္းကိုပြောပြတတ်ပြီး ပုတီးစိပ်တယ်***
***ဖုန်း ပိုက်ဆံအိတ် အိမ်သော့***
***မေမေ နှင့် မောင်လွင်ပြင်***
***မိမိကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံသူအားလုံးကို ခင်မင်ပါ၏***
***မေမေနှင့် ကျွန်မချစ်လင် မောင်လွင်ပြင်***
ကဲ ပစ်ပစ်ရေ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းရေးထားလိုက်တယ်နော် အမှားပါရင်တော့ခွင့်လွတ်သီးခံပေးပါလို့
တောင်းပန်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ထာဝရ ချစ်ခင်နေတဲ့ jasmine
အလုပ်မလုပ်ရ သေးတဲ့ နှလုံးသား (ဟာသ)
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, January 3, 2012
ဆရာဝန်။ ။ နောက်တစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်က အသက် ၁၉ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တာဝေး ရေကား ချန်ပီယံ။ ရေကန်ထဲ ဒိုင်ဗင် ထိုးဆင်းလိုက်တာ ရေကန်ဘောင်နဲ့ ဆောင့်မိလို့ သေသွားတာ။
သူ့ နှလုံးသား အတွက် ဒေါလာ တစ်သိန်းခွဲကျမယ်။လူ မမာ။ ။ နောက်တခုကရောဗျာ။
သမားတော်ကြီး ၁ ဦး၊ လယ်သမား ၁ ဦး နှင့် အလုပ်သမား ၁-ဦးသည် NGO တစ်ခုမှ အမှု ဆောင်အရာရှိ ၁-ဦးနှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ စိန့် ပီတာ နှင့်တွေ့ ၏။စိန့် ပီတာ။ ။ ကိုင်း --- အထဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ အတွက် ခင်ဗျားတို့ လူ့ ပြည်မှာ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ ပြောပါဦး။
ကျောင်းသား။ ။ ဟုတ်ကဲ့ သီဟတင်စိုး ပါခင်ဗျာ ။
တိရစ္ဆာန်တစ်စု ဝိုင်းဖွဲ့ စားသောက်နေကြသည်။ အာသွက် လျှာသွက် ဖြစ်နေကြသဖြင့် စကားဝိုင်းသည် စိုပြည်လှသည်။ အရက်ကုန်သွားသဖြင့် အရက်ထပ်ဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။ သို့နှင့် လိပ်ကို အရက်ဝယ်ရန် လွှတ်လိုက်ကြသည်။ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ ကြာသွားသည်။ လိပ် ပေါ်မလာချေ။ တိရစ္ဆာန်များထဲမှ လိပ်ကို ကျိန်ဆဲသံများ ပေါ် ထွက်လာသည်။ မနီးမဝေး ချုံထဲမှ လိပ်ထွက်လာပြီး စိတ်ဆိုးစွာ ပြောသည်။
ဆိုင်ထဲမဝင်ခင် ခြေထောက်ကို စင်အောင် သုတ်ပါတဲ့
ကိုဘမောင် တက္ကစီ စီးပြီး အိမ်သို့ ပြန်လာသည်။ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ
ပိုက်ဆံထွက်မလာချေ။ ကိုဘမောင် စိတ်ပျက်သံဖြင့်ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး
အားပါးတရ ရယ်ကြပါလို့ jasmine